Abahlinzeki be-PCR abaqondile kanye neFekthri | I-China Direct PCR Abakhiqizi
Iseli Direct RT qPCR Kit
Tshala iqabunga lekhithi le-PCR Plus
Lo mkhiqizo usebenzisa uhlelo oluyingqayizivele lwe-lysis buffer ukuze uvuse amaqabunga ezitshalo. I-lysate ingasetshenziswa njengesifanekiso ngaphandle kokuhlanzwa. Ngemuva kokungeza ama-primers, i-PCR Mix yale kit ingasetshenziselwa ukukhulisa.
Tshala Imbewu Iqonde ngqo ku-PCR Kit I / II
Le khithi isebenzisa uhlelo oluyingqayizivele lwe-lysis buffer ukuze i-lyse imbewu yezitshalo. I-lysate ingasetshenziswa njengesifanekiso ngaphandle kokuhlanzwa. Ngemuva kokungeza ama-primers, i-PCR Mix yale kit ingasetshenziselwa ukukhulisa.
Tshala iqabunga le-PCR eqondile kanye ne-kit-UNG
Ngokuya ngekhithi yePlant Leaf Direct PCR Plus, i-DUTP isetshenziswa esikhundleni se-dTTP, futhi kufakwa i-enzyme ye-UNG engehlisa isifanekiso esine-DUTP. Ngale ndlela, ukucaciswa nokunemba kokukhulisa amandla kuyaqinisekiswa, futhi inkinga yokungcola komkhiqizo we-PCR okungenzeka ngesikhathi sokuhlolwa kwezakhi zofuzo ezinkulu kuvinjelwe.
Tshala iqabunga i-PCR kit-UNG ngqo